Ukuma kwe-GMP kwe-Good Production Practice, Izinqubo ezinconyiwe zibeka izinga lokuguquguqukayo kokukhiqiza ngezidingo eziphansi ezimbonini ezahlukahlukene. Faka izimboni zokudla, ukukhiqizwa kwemithi, izimonyo, njll. Uma ibhizinisi lakho noma inhlangano idinga igumbi elilodwa noma ngaphezulu lokuhlanza, kubalulekile ukuthi ube nohlelo lwe-HVAC olulawula imvelo yangaphakathi ngenkathi igcina amazinga aphezulu ekhwalithi yomoya. Ngolwazi lwethu lweminyaka eminingi lokuhlanza, i-Airwoods inobungcweti bokuklama nokwakha izindlu zokuhlanza ezinamazinga aqinile kunawo wonke ngaphakathi kohlaka noma uhlelo lokusebenza.
Izidingo ze-HVAC ze-Cleanroom
Igumbi lokuhlanza yindawo elawulwa imvelo cishe engenazo izinto ezingcolisa imvelo njengothuli, izinto eziza emoyeni, amagciwane noma umusi wamakhemikhali, njengoba kulinganiswa ngezinhlayiya ngemitha ngalinye elilodwa.
Kunezigaba ezahlukahlukene zezindlu zokuhlanza, kuya ngesicelo nokuthi umoya kumele ungabi nangcolisi kangakanani. Izindlu zokuhlanza ziyadingeka ezinhlelweni eziningi zocwaningo ezifana ne-biotechnology, ezokwelapha nezemithi, kanye nasekwakhiweni kwemishini ebucayi ye-elekthronikhi noma yekhompiyutha, ama-semiconductors nemishini ye-aerospace. Izindlu zangasese zidinga uhlelo olukhethekile lokuhamba komoya, ukuhlunga kanye nezinto zodonga ukugcina ikhwalithi yomoya ikumazinga abekiwe. Kuzinhlelo eziningi, umswakama, izinga lokushisa kanye nokulawulwa kukagesi okungaguquki nakho kungadinga ukulawulwa.
Ifektri Yezinsiza Zokwelapha
Igumbi Eliphakathi Lokunikezela Ngezibhedlela
IYunithi yethu Yokuphathwa Komoya, i-Ceiling Systems, kanye ne-Customize Cleanrooms zilungele izikhungo ezidinga ukuphathwa kwezinhlayiya nokungcolisayo ezindaweni zokuhlanza nezindawo zelebhu, kufaka phakathi ukukhiqizwa kwemithi, ukukhiqizwa kwe-elektroniki okubucayi, amalebhu ezokwelapha nezikhungo zocwaningo.
Onjiniyela nochwepheshe be-Airwoods bangongoti besikhathi eside ekwakheni, ekwakheni nasekufakeni izindlu zangasese ezihlanzekile kunoma yikuphi ukuhlukaniswa noma okujwayelekile okudingwa amaklayenti ethu, kusebenzisa inhlanganisela yokuhlunga kwekhwalithi ye-HEPA ngobuchwepheshe obuphambili bomoya ukuze ingaphakathi likhululeke futhi lingcoliswe mahhala. Kumakamelo ayidingayo, singakwazi ukuhlanganisa izingxenye ze-ionization nezokukhipha inyumbazane ohlelweni lokulawula umswakama nogesi ongaguquguquki esikhaleni. Singakwazi ukuklama futhi sakhe izindlu zokuhlanza ze-softwall & hardwall zezikhala ezincane; singafaka ama-modular cleanrooms ezinhlelo zokusebenza ezinkulu ezingadinga ukuguqulwa nokwandiswa; futhi ngezicelo ezihlala njalo noma izikhala ezinkulu, singakha igumbi lokuhlanza elakhelwe ngaphakathi ukubhekela noma yiliphi inani lezinto zokusebenza noma noma yiliphi inani labasebenzi. Siphinde futhi sinikeze nge-one-stop EPC yonke imisebenzi yokupakisha iphrojekthi, futhi sixazulule zonke izidingo zamakhasimende kuphrojekthi yekamelo elihlanzekile.
Ayikho indawo yephutha uma kukhulunywa ngokuklama nokufaka izindlu zokuhlanza. Noma ngabe wakha igumbi lokuhlanza elisha kusuka phansi kuya phezulu noma uguqula / unweba elikhona, i-Airwoods inobuchwepheshe nobuchwepheshe bokuqinisekisa ukuthi umsebenzi wenziwa kahle okokuqala ngqa.
Igumbi lokuhlanza le-ISO 8 leNkampani Yezimonyo yase-Australia
Igumbi lokuhlanza le-ISO8 le-Ethiopian Airlines
IBangladesh Ikhukhumeza Ukudla Icubungula Igumbi Elihlanzekile
I-Bangladesh Injector Production Igumbi lokuhlanza
Igumbi lokuhlanza eligcwalisa amanzi laseGhana
Iziphuzo I-Workroom Workshop Pepsi Cola Project
Isikhungo Sokulawula Izifo se-PCR
Igumbi lokuhlanza elenziwa imaski elilahlayo
Indawo Yokuhlanza Isikhungo Sokudla Nezidakamizwa